Diabetic Ketoacidosis (ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ သွေးတွင်း ကီတုန်း များပြားပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်လွန်ကဲလာမှု) - Hello Sayarwon
Diabetic Ketoacidosis (ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ သွေးတွင်း ကီတုန်း များပြားပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်လွန်ကဲလာမှု)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Diabetic Ketoacidosis (ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ သွေးတွင်း ကီတုန်း များပြားပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်လွန်ကဲလာမှု)
ရေးသားသူ Dr. Khin Yin Kyay ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
Diabetic Ketoacidosis (ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ သွေးတွင်း ကီတုန်း များပြားပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်လွန်ကဲလာမှု) ကဘာလဲ။
ဒီရောဂါဟာ ဆီးချိုရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ketone လို့ခေါ်တဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်တွေ သွေးထဲမှာ အများအပြားထုတ်တဲ့အခါ diabetic ketoacidosis လက္ခဏာတွေကို ခံစားရပါတယ်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်တွေစွမ်းအင်ရဖို့အတွက် ဂလူးကို့စ်သကြားဓာတ်ကို စုပ်ယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုစုပ်ယူဖို့ရာ လုံလောက်တဲ့ အင်ဆူလင်ကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပြီး ဆီးချိုရောဂါကြောင့် မထုတ်နိုင်တဲ့အခါ ဒီရောဂါကို ခံစားရပါတယ်။
Diabetic Ketoacidosis (ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ သွေးတွင်း ကီတုန်း များပြားပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်လွန်ကဲလာမှု) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ ဆီးချိုရောဂါ အမျိုးအစား(၁) ရှိသူမှာရော အမျိုးအစား(၂)ရှိသူမှာပါ အဖြစ်များပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ဆီးချိုရောဂါရှိမှန်း သတိမထားမိသူတွေမှာလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
လူငယ်တွေနဲ့ ကလေးတွေမှာလည်း ဒီရောဂါခံစားရဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိနေပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Diabetic Ketoacidosis (ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ သွေးတွင်း ကီတုန်း များပြားပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်လွန်ကဲလာမှု) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Diabetic ketoacidosis ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
• ပင်ပန်းနုံးချိပြီး ဖျားခြင်း၊
• သင့်သွေးထဲတွင် သကြားဓာတ်နဲ့ ketone ဓာတ်များ များပြားလာခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။
• အကယ်၍သင်ဟာ နေမကောင်းဘူး ဖိစီးမှုဖြစ်လာတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အခါ (သို့) လတ်တလောမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားခြင်း၊ ဖျားခြင်း ဖြစ်တဲ့အခါ သင့်သွေးထဲမှ အချိုဓာတ်ကိုကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ အပြင် ဆီးထဲမှ ketoneဓာတ်စစ်တဲ့ အတံကိုဝယ်ယူပြီး ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
• သင်ဟာ အန်ပြီး ဘာမှ မစားမသောက်နိုင်ဘူး ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။
• သင့်သွေးအချိုဓာတ်ဟာ ရှိသင့်တာထက်ပိုလာပြီး အိမ်တွင်းကုထုံးတွေဟာလည်း မသက်သာစေဘူးဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• ဒါ့အပြင် သင့်ဆီးထဲမှ ketoneဓာတ်ဟာ အနည်းငယ်(သို့) အတော် မြင့်လာပြီဆိုရင်လည်း ပြသသင့်ပါတယ်။
Diabetic Ketoacidosis (ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ သွေးတွင်း ကီတုန်း များပြားပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်လွန်ကဲလာမှု) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အင်ဆူလင်မရှိခြင်းက သင့်ရဲ့ဆဲလ်တွေ ကြွက်သားတွေ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို စုပ်ယူဖို့ရာ ရပ်တန့်စေပါတယ်။ ဒီလိုမစုပ်ယူနိုင်ရင် သင်လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်တွေရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ diabetic ketoacidosis ဟာ အောက်ပါအကြောင်း တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• ဖျားနာခြင်း – ဖျားနာခြင်း (သို့) ပိုးဝင်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှ adrenaline (သို့) cortisol ကဲ့သို့ဟော်မုန်း တွေကို ပိုထွက်လာစေပါတယ်။ သူတို့ဟာ အင်ဆူလင်ရဲ့ အလုပ်အပေါ်ကို လာသက်ရောက်ကြပြီး diabetic ketoacidosis ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
• အပြင်မှ အင်ဆူလင်နဲ့ ကုသခြင်းကြောင့်လည်း ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်တဲ့ အင်ဆူလင်ကို လျော့နည်းလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း diabetic ketoacidosis ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
• ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာများ ခံစားနေရခြင်း၊
• အရက်(သို့) ဆေးစွဲနေခြင်း
• corticosteroids ဆေးများနဲ့ အချို့သော ဆီးဆေးကဲ့သို့ ဆေးများ စတာတွေဟာလည်း ဒီရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Diabetic Ketoacidosis (ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ သွေးတွင်း ကီတုန်း များပြားပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်လွန်ကဲလာမှု) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Diabetic ketoacidosis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ-
• သင့်တွင် ဆီးချိုရောဂါ အမျိုးအစား(၁) ရှိလျှင်နဲ့
• အင်ဆူလင်နဲ့ ကုသမှု မေ့လျော့၍ လွတ်သွားသည့်အခါမျိုးတွင် စတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။
Diabetic Ketoacidosis (ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ သွေးတွင်း ကီတုန်း များပြားပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်လွန်ကဲလာမှု) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
• သင့် သွေးတွင်းဂလူးကို့စ်ပမာဏ၊ ketone ပမာဏ နဲ့ သွေးတွင်းအက်ဆစ်ဓာတ်ကို သိစေရန် သွေးစစ်ကြည့်ခြင်း၊
• သွေးတွင်း electrolyte သတ္တုဓာတ်များကို စစ်ဆေးခြင်း၊
• နှလုံးရဲ့ ခုန်သောလျှပ်စီးပုံစံကို သိရန် နှလုံး အီးစီဂျီဆွဲခြင်း စတာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Diabetic Ketoacidosis (ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ သွေးတွင်း ကီတုန်း များပြားပြီး အက်ဆစ်ဓာတ်လွန်ကဲလာမှု) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အင်ဆူလင်နည်းနေတာ ဖြစ်လို့ ဆရာဝန်ဟာ သင့်သွေးပြန်ကြောထဲသို့ အောက်ပါအရာတွေကို သွင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• ဆိုဒီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ် နဲ့ ကလိုရိုဒ်ဓာတ်တွေ ပါဝင်တဲ့ electrolyte သတ္တုဓာတ်၊
• သင့်ခန္ဓာကိုယ် ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့ အရည်များ၊
• အင်ဆူလင် စတာတွေကို သွင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Diabetic ketoacidosis. https://medlineplus.gov/ency/article/000320.html. Accessed July 20, 2016.
Diabetic ketoacidosis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetic- ketoacidosis/basics/definition/con-20026470.
Accessed July 20, 2016.
Diabetic ketoacidosis (DKA). http://www.webmd.com/diabetes/tc/diabetic-ketoacidosis- dka-topic- overview. Accessed July 20,
Diabetic ketoacidosis. http://www.nhs.uk/Conditions/diabetic-ketoacidosis/Pages/Introduction.aspx. Accessed July 20, 2016.Diabetic ketoacidosis. https://medlineplus.gov/ency/article/000320.html. Accessed July 20, 2016.
Diabetic ketoacidosis. http://www.nhs.uk/Conditions/diabetic-ketoacidosis/Pages/Introduction.aspx. Accessed July 20, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုငျ 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖျောဝါရီ 23, 2018